I-Baita Fiess - inn yeholide eValtellina - I-Airbnb
I-Baita Fiess - inn yeholide eValtellina
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Enzo
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Enzo izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indlu yasendulo yezintaba yango-1786 yalungiswa ngokuphelele ngesandla etholakala ohlangothini lwe-panoramic lwe-Western Val Grosina ngamamitha angu-1190 ngaphezu kolwandle.
Kusukela otshanini obungaphandle umbono ubusa isigodi esizungezile se-alpine futhi ngisho nangaphakathi kweqhugwane ungakwazi ukuphefumula intaba.
Amakamelo athokomele futhi afudumele anezangaphakathi aqedwe ngokhuni, ahlalisa abantu abangu-4 ngekamelo lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokulala elinemibhede emi-2 eyodwa. Indawo ekahle yalabo abathanda ukuphumula, imvelo kanye nezemidlalo.
I-Baita eValgrosina ihlelwe ezitezi eziningana. Ekungeneni uzothola igumbi lokugezela eliphelele elineshawa kanye ne-boiler yokushisa izinkuni yamanzi ashisayo. Uma ukhuphuka ngezitebhisi ungena esitezi esikhulu esinekhishi, itafula lokudlela nendawo yokuphumula enezihlalo ezimbili ezintofontofo.
Esitezi esisodwa kunekamelo lokulala eliphindwe kabili elinekhabethe elikhulu lokugcina imiphumela yomuntu siqu.
Izitebhisi zangaphakathi zokhuni ekugcineni ziholela phansi ophahleni lwendlu lapho kuhlelwe khona imibhede emibili eyodwa, endaweni esondelene futhi elula.
Ugesi uhlinzekwa ngamaphaneli elanga kanye neyunithi yokulawula engu-12 volt yezibani futhi nge-inverter amasokhethi asebenza ku-220 volts.
Izikhala ze-Baita e-Valgrosina zihlonipha indawo yokuqala yendlu ehlehlela emuva ku-1786 futhi ibonisa iqhugwane lezintaba elivamile lase-Valtellinese.
Ikhaya leholide elihle eValgrosina lithathela igama esigodini esincane se-alpine lapho lifakwe khona. Kusukela maphakathi nomasipala waseGrosio kuqala umgwaqo oholela eVal Grosina, isigodi esiseceleni kweValtellina esithandwa kakhulu abantu bendawo.
I-fairytale landscape ivuleka isuka eSanctuary ye-Madonna della Neve (eyakhiwa ngo-1888) endaweni yaseFusino. Uma uqhubeka nomgwaqo ufika esiphephelweni sase-Eita (cishe amakhilomitha angu-8 ukusuka ekhaya lamaholide), kuyilapho ujikela kwesokunxele uthatha umgwaqo oholela ekhaya lethu elihle leholide elingasentshonalanga yesigodi. Ukuqhubeka ngale kweqhugwane cishe amakhilomitha ayi-10 ukusuka ekhaya lamaholide, uzofika e-Alpe Malghera. Kokubili u-Eita kanye ne-Malghera bayizindawo ezinhle zokuqala zohambo oluningi lokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngamabhayisikili.
Vakashela umhlahlandlela ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuhamba ngezinyawo, imizila nohambo olunconyiwe.